Inona no ilainao ho fantatra momba ny Semalt
Androany, sarotra ny mahita tompona tranonkala izay tsy ho nahare momba an'i Semalt. Satria amin'ny fomba iray na iray hafa dia tsy maintsy miatrika optimization SEO ny olona. Ny fampiroboroboana ny tranokala ao amin'ny milina fikarohana dia lasa lohahevitra be mpiresaka. Semalt dia nametraka ny tenany ho mpitarika amin'ny fampiroboroboana tranonkala ary nanaporofo ny maha-ambony azy ao amin'ity sehatra ity nandritra ny folo taona lasa.
Tsy teny tsy nampihetsi-po ireo, ny zava-misy rehetra dia nohamafisin'ireo mpanondro marobe ny fahavitan'ny tetikasa mahomby. Mpanjifa an-jatony no nanoratra valiny mahaliana momba ny fiaraha-miasa amintsika satria nanomboka nivelatra ny orinasany. Ireo mpifaninana rehetra dia navela lavitra ary tsy nisy tranga iray azo ahataovana ny toerany ao amin'ny moteur fikarohana. Miharihary fa tsy vita ny fahombiazan'ny SEO raha tsy misy ny Semalt, ity no hajarantsika manokana izay hiantsorohan'ireo matihanina avo lenta. Ankoatra izany, tsy manam-potoana hialana amin'ny volavola isika, manatsara ny fomba fanaonay isan'andro amin'ny fanomezana ny teknolojia SEO maoderina. Mivoatra isika ary miaraka miompana miaraka aminay ny orinasanao.
Tsy maintsy manome pankasitrahana amin'ny ekipanay izahay, ahitana ireo mpitantana za-draharaha, manam-pahaizana manokana momba ny IT, manam-pahaizana amin'ny SEO, mpanoratra mpanoratra ary mpitantana ny marketing. Afaka manome toky anao avy hatrany izahay, tsy misy toerana ho an'ny mpisolovava ao amin'ny Semalt. Ny manam-pahaizana manokana dia manana traikefa be dia be amin'ny fampiroboroboana SEO, afaka mieritreritra stratejika ary mifantoka foana amin'ny fahombiazana.
Jereo ny tena tranga niseho tao amin'ny tranokalanay. Ho tratry ny ain'ireo tranokala nalainay ny olana lehibe. Miara-miasa amin'ny tranokala rehetra izahay ary manavotra azy ireo amin'ny fahalavoana efa akaiky. Angamba, olona maro no liana amin'ny teknika sy ny fitsipiky ny asantsika. Ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny fomba fitantanana ataontsika amin'ny toerana avo lenta, ary ny antony mahatonga ny Semalt irery ihany no orinasa miantoka ny fahombiazanao.
Ny teny SEO dia entina hilazana ny fitrandrahana tranonkala noho ny fepetra takian'ny milina fikarohana. Ohatra, aorian'ny famoronana loharanom-baovao an-tserasera iray hamidy ny fivarotana entana na serivisy iray dia ilaina ny mitondra fampahalalana momba azy io amin'ny habetsaky ny mpikambana ao amin'ny mpihaino kendrena.
Na ireo mpampiasa azy ireo izay mitady vokatra na serivisy toy izany aza tsy ho afaka hahita azy ireo ao amin'ny valin'ny fikarohana raha tsy efa eo amin'ny pejy voalohan'ny milina fikarohana ny tranokala. Azonao atao ny manatratra azy amin'ny optimization SEO. Noho ny fahazoan'ny mpanjifa mividy entana sy serivisy amin'ny Internet, ny orin'asa rehetra dia mila fampiroboroboana fikarohana.
Ny fomba rehetra ampiasaina amin'ny fampiroboroboana tranonkala SEO amin'ny tambajotra manerantany dia mizara ho fomba ivelany sy anatiny. Amin'ny tranga voalohany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny tranokala an-tserasera fahatelo, ny faharoa - ao anaty tranokala. Ny tanjon'ny optimization ivelany dia ny famoahana ny atiny any ivelan'ny tranokalan'ny orinasa. Manome fifamoivoizana be dia be sy loharano rohy azo ekena ho an'ny tranokala nampiroborobo izany, ary koa manampy amin'ny fanatsarana ireo toerana ao amin'ny milina fikarohana. Toro-lalana lehibe amin'ity karazana fampiroboroboana ity:
fisoratana anarana amin'ny katalog;
famoahana ireo famoahana gazety sy lahatsoratra amin'ny sehatra hafa an'ny Internet.
Ny fanandramana SEO anatiny amin'ny tranokala dia ahitana ireto karazana asa ireto:
mamorona votoaty tokana sy avo lenta;
mifantina ny teny fanalahidy mety sy fandefasana azy ireo mihetsika amin'ny lahatsoratra.
Inona no atolotry Semalt
Namolavola fepetra maromaro napetraka amin'ny fampitomboana ny fifamoivoizana amin'ny tranokalanao sy ny fisiany ianao. Ireo asa ilaina roa ireo dia mamaritra ny fampiroboroboana ny SEO. Ho fampitomboana ny fahombiazan'ny fiantohana, natsangana vahaolana tsy manam-paharoa - AutoSEO sy FullSEO. Ireo dia fampielezan-kevitra manokana ahafahanao manatratra valiny amin'ny fotoana fohy kokoa. Ankoatra izany, hodinihintsika tsara izy ireo, fa izao, andeha hodinihintsika izay tena ataon'i Semalt. Ireto misy soso-kevitra lehibe indrindra:
fampandrosoana ny tranonkala;
horonantsary fampiroboroboana ny orinasanao.
Fanentanana AutoSEO nataon'i Semalt
AutoSEO dia dingana maromaro natao hametrahana ny tranokalanao eo amin'ny toerana ambony amin'ny motera fikarohana. Tena ilaina ny mahatakatra tsara an'io fomba io. Tsy sakana majika izy io, fa ny hetsi-kevitry ny orinasanay ao anatin'ny rafitry ny SEO-optimization. Minoa, ny fisian`ny pali dia tsy manome lasopy matsiro, noho izany ny asa dia atambatry ny manampahaizana manokana. Ny fampielezan-kevitra AutoSEO dia mety hahomby ihany amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa amin'ny mpanjifa interaksi miaraka amin'ny ekipa Semalt. Ity misy izay tafiditra ao AutoSEO:
Mahareta amin'izay ary jereo ny fomba fiasa. Manomboka amin'ny fisoratana anarana amin'ny tranokalanay rehetra izany rehetra izany. Manaraka, vita daholo ny zava-drehetra ataon'ny mpandinika ny tranokala, izay mandinika tsara ny firafitry ny tranokala araka ny fenitra SEO. Mahazo ny fampahalalana ilaina rehetra ianao amin'ny endrika tatitra misy ny lisitry ny lesoka izay tsy maintsy raikitra. Miorina amin'ny famakafakana, ny injeniera SEO dia mamaritra ny teny fanalahidy mety hampiakatra ny fifamoivoizana amin'ny tranokala.
Ny dingana manaraka dia ny fametrahana rohy amin'ny Internet amin'ireo loharano an-tserasera samihafa. Tsy maintsy mifanandrify rohy ny votoaty ary mitondra ny sanda semantaly. Ny fanarahan-dia dia arahi-maso tsy tapaka ny tompon'andraikitra, izay manara-maso ny toeran'ny rohy ao amin'ny milina fikarohana. Tsy mila miahiahy momba ny zavatra iray ianao, fehezina tanteraka ny zava-drehetra mandritra ny fampielezankevitra. Ny loharanom-pifandraisana an-tserasera dia voafantina miaraka tsara, noho izany ny fahafahan'ny miditra ao anaty lisitra tsy mitombina.
Miaraka amin'ny fidirana amin'ny FTP (File Transfer Protocol), ny manam-pahaizana manokana momba ny Semalt dia manao fanovana sasantsasany izay aseho mialoha ny tatitra momba ny tranonkala. Ireo fanovana ireo dia mitarika amin'ny fizotran'ny tranonkala iray. Ny andraikitr'i Semalt amin'ity sehatra ity dia ny fanavaozana ny laharana isan'andro, amin'ny fampidirana ireo teny fanalahidy vaovao izay mifanentana amin'ny atiny. Ny tombony amin'ny AutoSEO dia ny fanatanterahana ny fampielezan-kevitra miaraka amin'ny fandraisan'anjaran'ny mpampiasa azy na tsia, fa mijanona hatrany ianao amin'ny zava-drehetra. Ny fonosana AutoSEO isam-bolana dia mitentina $ 99.
Inona no FullSEO
Mba hahafantaranao bebe kokoa amin'ity rafitra optimization SEO ity, manolotra anao izahay mba hahafahanao mamantatra ny fomba feno amin'ny FullSEO, izay mikendry ny hampitombo ny isa ny tranokala ihany koa amin'ny fikarohana moto. Ny fahasamihafana miaraka amin'ny AutoSEO dia ny vokatra azo ao anatin'ny fotoana fohy kokoa. Ny fototry dia optimization anatiny sy ivelany, ataon'ny manam-pahaizana manokana amin'ny SEO. Vokatr'izany, ny fampielezan-kevitra FullSEO dia tsy vitan'ny hoe maka toerana ambony eo amin'ny faritra an-tsena, fa koa manosika ny mpifaninana tsy hihena.
Endrika misy ny fampielezan-kevitra FullSEO
Atombohy ny fanentanana FullSEO manomboka amin'ny fotoana anaovanao sonia. Ny famakafakana lalina ny firafitry ny tranokala dia tanterahina, miaraka amin'ny famoahana tatitra manaraka. Manaraka, misy manam-pahaizana SEO manao vahaolana semantitra amin'ny tranokalanao, manamarina ny fanamafisana ary mamantatra ny fototry ny semantik. Vokatry ny famakafakana, fantatra avokoa ny lesoka rehetra mila fanitsiana ho an'ny fandrosoana bebe kokoa. Avy eo dia famaritana hamaritana teny fanalahidy mety hampitomboana ny fifamoivoizana. Araka izany, mahazo vahana amin'ny sehatra rehetra ny tranokala. Aorian'ny fidirana amin'ny FTP dia hanao ny fanovana ilaina ao anatin'ny tatitra ny manampahaizana manokana.
Ny dingana manaraka dia ny fanandramana ivelany. Ny matihanina SEO dia hametraka rohy ho an'ny loharano niche izay taratry ny fototry ny votoatinao. Rehefa mandeha ny fotoana dia manomboka hitondra voka-tsoa ho an'ny tranokala ireo rohy ireo. Amin'ny kaonty Semalt, misy habaka voamarina marobe izay azonao iarahanao miasa miaraka amina vokatra, ho an'ny tombotsoan'ny fahombiazan'ny tranokalanao. Eo ambany fanaraha-mason'ny manam-pahaizana manokana foana ny fampielezan-kevitra FullSEO, misy fanavaozana fanaovan-tsoa fampiasa isan'andro, raha takiana. Mba ahafahanao miandoha hatrany amin'ny fanovana rehetra sy ny fitomboan'ny haavon'ny tranokala dia omena ireo tatitra momba ny toetran'ny tranonkalanao ao amin'ny milina fikarohana. Mandeha amin'ny famantaranandro io dingana io, ka tsy azo atao ny misisika fotoana lehibe.
Indraindray mitranga izany noho ny antony sasany tsy maintsy hanajanonana ny fampiroboroboana SEO ianao. Amin'ity tranga ity, mazàna ny Google dia manaisotra ireo backlink rehetra avy ao anaty tahiry data. Hanomboka ho latsaka haingana ny filaharana, fa aza manahy mafy, hijanona amin'ny toerana iray ihany izy ireo. Ho ambony lavitra noho izany ny toerany noho ny teo alohan'ny fampielezan-kevitra FullSEO. Amin'ny ankapobeny, misy tsirairay ny optimization SEO, ka sarotra ny mamantatra ny vidin'ny fampielezana feno FullSEO alohan'ny manam-pahaizana iray momba ny SEO mandinika ny tranonkalanao amin'ny antsipirihany.
Inona ny Analytics
Semalt koa dia manolotra optimization SEO amin'ny alàlan'ny Analytics. Amin'ny teny hafa, serivisy ho an'ny fanadihadihana an-tserasera momba ny tranonkala miaraka amin'ny famoronana tatitra amin'ny antsipiriany. Marihina fa ankoatry ny fanaraha-maso ny tranokalan'ny lasibatra, dia mamakafaka ny tranokalan'ny mpifaninana, manangona ireo teny fanalahidy mba hanamafisana ny fototry ny tranokala semantaly, ary koa ny fananganana toeran'ny marika mifaninana. Ny anadihady dia manome ireto manaraka ireto:
Ny fanangonana ny angona an-tsoratra dia manomboka vantany vao misoratra anarana ao amin'ny tranokalanay izahay. Mitranga izany mandeha ho azy, isaky ny mamita ny angon-drakitrao ianao dia mahazo tatitra izay manambara mazava ny tena toeran'ny tranonkalanao. Ny tranokalan'ireo mpifaninana dia zahana ihany koa, ary azonao ny fampahalalana rehetra momba ny toerany. Ny fenitra SEO dia raisina an-tsaina mandritra ny famoronana tranokala tranokala, noho izany dia ahitanao ny fiovan'ny lozisialy ho anao raha mila.
Raha manana kaonty manan-kery ianao dia afaka manampy tranokala misy ao amin'ny kabinetranao manokana. Ireo tranokala rehetra dia hofakafakaina. Ny famakafakana voalohany dia mampiseho izay teny mety hampiasaina. Ny rafitra dia mifidy afa-tsy ny teny fanalahidy momba ny atiny. Izany hoe misy fiantraikany mahasoa amin'ny teny rehetra ny fitomboan'ny fidiran'ny tranokala. Azonao atao ny mamafa na manampy teny fanalahidy hafa araka ny sainao.
Ny fahazotoana dia ny manadihady ilay tranokala ary manara-maso ny fivoarany mandritra ny famantaranandro. Zava-dehibe ny manangona vaovao momba ireo mpifaninana aminao. Ianao foana no mahalala ny zava-drehetra mitranga ao amin'ny tranokalany, ary lazain'ny Analytics anao ny hetsika tokony hatao raha tsy mihoatra ny mpifaninana ao amin'ny milina fikarohana. Azonao atao ny mampiasa Application Programming Interface (API), tena tsara eo amin'ireo mpampiasa izany satria ny fampahalalana dia namboarina tampoka ny angon-drakitra, ahafahana miambina hatrany amin'ny fanavaozana rehetra. Misy fonosana tarif telo misy ao amin'ity sokajy serivisy ity:
Ao amin'ny Web Development, Semalt dia manome soso-kevitra feno amin'ny famolavolana feno ny tranonkala ara-barotra ary mamolavola ny sangan'asa azy:
fampifangaroana amin'ireo fampiharana fahatelo;
Rafitra fitantanana ny votoaty;
Modules e-commerce manokana;
Ny singa tsy maintsy ilaina amin'ny tetikasam-barotra napetraka mandritra ny famelabelarana tetikasa Internet ara-barotra lehibe dia horonantsary izay mamintina ny fototra sy ny tombotsoan'ny orinasa vaovao. Amin'ny maha-ampahany amin'ny serivisy "Product Video Production", Semalt dia manolotra fomba roa hamoronana horonan-tsary toy izany:
amin'ny fanapahan-kevitry ny tsirairay (ny vidin'ny isam-bato dia misaraka.
Ny fifandimbiasana amin'ny fiasa fandoavam-bola dia vita amin'ny famaritana ny fonosana tariby, amin'ny alàlan'ny tsindrio ny bokotra "Subscribe". Ny fividianana ny fonosam-pandeha dia mety hiteraka amina volam-pirenena. Ny mpisafidy mihodina dia hita ao amin'ny tapany ambony amin'ny taratasy fandoavam-bola.
Taorian'ny zava-drehetra voalaza etsy ambony, dia tena sarotra ny misalasala ny mahomby ny optimization SEO amin'ny fomba Semalt. Angamba nisy fanontaniana fanampiny satria tsy afaka nandrakotra ireo fofona tena zava-dehibe ny lahatsoratra. Noho izany, tsara kokoa ny mifandray amin'ny orinasa tsy misy hatak'andro. Ny vaovao haingana eo amin'ny Semalt no maheno anao, ny haingana dia ho lasa manankarena. Miandry anao izahay!